ညစ်ညမ်းမှုပြန့်ပွားခြင်းသည်အမျိုးသားများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပျက်စီးစေသောပုံဖြစ်သည်။ အန်ဂျလာဂရက်ဂိုရီ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ခေါင်းဆောင်၊ Chandos ဆေးခန်း၊ Nottingham U. အတွင်းရေးမှူးဗြိတိန်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာအသင်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်သည်။
ညစ်ညမ်းမှုပြန့်ပွားခြင်းသည်အမျိုးသားများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုမည်သို့ပျက်စီးစေသနည်း။ အန်ဂျလာဂရက်ဂိုရီ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ခေါင်းဆောင်၊ Chandos ဆေးခန်း၊ Nottingham U. အတွင်းရေးမှူးဗြိတိန်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာအသင်း (၂၀၁၆) မှ
By Angela ဂရက်ဂိုရီ သြဂုတ်လ 19, 2016 (မူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်)
သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ထဲကကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်အဘယ်သူသည်ယောက်ျား (နှင့်တခါတရံတွင်အမျိုးသမီးများကို) တွင်တစ်ဦးတိုးရှိပါတယ်, NHS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး psychotherapist Angela ဂရက်ဂိုရီကပြောပါတယ်
အတိတ် 16 နှစ်ပေါင်းငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမကုသတစ်ခု NHS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး psychotherapist အဖြစ်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဆေးပညာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ethology သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးအရောအနှောများရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးခန်းမှာတော့ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင် 18 နှစ်ပေါင်းထံမှလူကြီးများကိုကြည့်ပါ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလေ့ cardio သွေးကြောရောဂါ, ဆီးချို, ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်မှု, ကျောရိုးဒဏ်ရာနှင့်မျိုးစုံနဗ်ကြောနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းကျော် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှောင့်နှေး / ဘယျလိုမှမသုတ်ရည်လွှတ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ NHS ဆေးခန်းရည်ညွှန်းခံရလူပျိုတို့အတွက်တစ်ဦးတိုးရှိခဲ့သည်, ငါမကြာမီ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်း porn အသုံးပြုမှုနဲ့တွဲပြီးသူတို့ရဲ့ masturbatory အလေ့အထဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောထိန်းသိမ်းခြင်းအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက် အခက်အခဲများ။
ထို့အပြင်အမျိုးသားများ (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများ) သည်သူတို့၏လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း၊ သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေပြီး၊ အနှစ်သာရအားဖြင့်သူတို့၏ဘဝများကိုသိမ်းပိုက်လိုက်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသောအမျိုးသားများ (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများ) တိုးပွားလာခြင်းမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဆက်သွယ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသောဒီဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုအင်တာနက်၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာများက ပို၍ ပုံသွင်းလာသည်။ အင်တာနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှု။ အမည်ဝှက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်လူငယ်များအား“ ပုံမှန်” နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဘွား Littlewoods catalog ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားကဏ္ section သို့မဟုတ် Playboy နှင့် Penthouse ကဲ့သို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဂ္ဂဇင်းများအလယ်စာမျက်နှာပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အချိန်များပျောက်ကွယ်သွားပြီ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိ ဦး နှောက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တွေ့သောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ရေရှည်အကျိုးဆက်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာလူသားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အရည်အချင်းမပြည့်ဝမှုခံစားချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးအခြားအဆင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချို့သောအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်းတာမှုမပြုကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လူငယ်များသည်အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်များရှိနေပြီးအွန်လိုင်းတွင်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောပုံရိပ်များနှင့်အိုလံပစ်ပုံစံဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်၎င်းတို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။
Porn sex သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်သည်။ မည်သည့် orifice မဆိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအာမခံသည်။ ချစ်ခြင်း၊ လှောင်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရသည်။ ခက်သည်၊ လျင်မြန်စွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ တိုင်းတာရန်တိုင်းတာသည့်“ ပျက်ကွက်ခြင်း” ကိုလူမှုကွန်ရက်များတွင်ချက်ချင်းတင်နိုင်သည်။
တချို့ကကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှုကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ desensitisation ထံမှစိုက်ထူပြဿနာတွေနဲ့သုတ်ရည်လွှတ်အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ www.yourbrainonporn.org အငယ်ယောက်ျားလေးကသူကြာကြာ porn ကိုကြည့်စတင်သည်အခါအလွန်အမင်းဆွနှိုးဆွများ၏အေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှု reverse မှယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းကထား, သူတို့ကနှိုးဆွသောသူတို့၏ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား sexy သို့မဟုတ်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ကိုရှာဖွေသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
ဆက်ဖတ်ရန်: ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
sexology / လိင်ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟူသောဝေါဟာရတည်ရှိမှုနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုများစွာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့သည့်ဟောလိဝုဒ် A-list သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းစာတစ်စောင်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ဆင်ခြေတစ်ခုဟုထင်ရကြောင်းကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု / ညစ်ညမ်းမှုသည်လူငယ်များနှင့်သူတို့၏ရင်းနှီးချစ်ခင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုများကိုပုံဖော်။ ထိန်းသိမ်းရန်သူတို့၏စွမ်းရည်အပေါ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်မမှားပါစေသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပုံရိပ်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ကိုအားနည်းချက်ရှိကြသည်။
အောက်တွင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ချက်တင်ခန်းကြည့်ရှုန်းကျင်လုံးဝ Revolver သူ၏အသက်တာခံစားရသူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ယောက်ျား၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
သူ 13 ၏အသက်အရွယ်မှာသူသည်မိမိကျောင်းတွင်မိတ်ဆွေတစ်နေဖြင့်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေမှမိတ်ဆက်သောအခါမိမိအပြဿနာများစတင်ခံစားလာရပါတယ်။
မိမိအစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသူသည်လက်ရှိတွင်သူသည်မိမိအိပ်ခန်းထဲမှာအလုပ်မှာတခါတရံတွင်အများပြည်သူသောနေရာများအတွက်တစ်နေ့လျှင်ငါးကြိမ် masturbates ။
သူသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းမရှိသဖြင့်“ သာမန်” ဘဝမှအထီးကျန်သည်ဟုခံစားရသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: ဘယ်အချိန်မှာကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယူတာပဲဖြစ်ခြင်း, ပါးစပ်လိင်မှကြွလာ
ဝမ်းနည်းစရာကဒီအခြေအနေမှာများစွာသောလူများအတွက်အနည်းငယ်သာ NHS အကူအညီဤမျှလောက်များစွာသောကဲ့သို့သောအကူအညီတောင်းအွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှဖွင့်ပါလိမ့်မယ်မရရှိနိုင်ပါရှိ www.yourbrainonporncom နှင့် www.nofap.com။ ပုဂ္ဂလိကကုထုံးများကိုလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုကုထုံးကောလိပ် (COSRT) နှင့် Relate ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ Paula Hall ၏လိင်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းသည်လည်းအသုံးဝင်သည်။
မိဘများအဘို့, porn sites များပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခု option ကိုသော်လည်းဝမ်းနည်းစွာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသည့်ရေခဲတောင်သာအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ တွစ်တာ, Snapchat နှင့်ချက်တင်ခန်းလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ chat နဲ့ဗီဒီယိုလူငယ်များဖော်ထုတ်။ အညီအမျှစိုးရိမ်စရာကလေးများနှင့်လူငယ်များလိုလိုလားလားအွန်လိုင်းမိမိတို့မစင်ကြယ်သောရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကလေးခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုစင်တာ (CEOP) တွေ့ရှိခဲ့ သားသမီးများ၏လိင်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကို၏အများစုသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့မဆိုပြင်ပအကျပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်ကိုအပ်လုဒ်လုပ်ထားကြပါတယ်။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့်ရွယ်တူချင်းဖိအားများသည်အင်အားကြီးမားပြီးဆွဲဆောင်နိုင်သောလက်နက်များဖြစ်ပြီး၊ သူတို့၏လိင်ပညာရေးအတွက်တာဝန်ရှိသောရှက်ရွံ့သောဆရာမ၏စိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်ခဲသည်။ အရွယ်ရောက်သူများအနေဖြင့်အင်တာနက်နှင့်လူမှုမီဒီယာများ၏စွမ်းအားကိုစိန်ခေါ်ရန်တိုက်ပွဲတွင်ပထမဆုံးခြေလှမ်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အဘယ်အရာရှိကြောင်းကိုသတိပြုမိရန်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပွင့်လင်း။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Angela ဂရက်ဂိုရီဟာ Chandos ဆေးခန်းမှာ Psychosexual ကုထုံး, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Trust မှမှာအခြေစိုက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ကိစ္စကမောက်ကမဖြစ်မှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ခဲသည်။ သူမသည်လတ်တလောတွင်လိင်ဆေးပညာဗြိတိသျှ Society ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။